Wasiir CAWAD oo sharaxay mowqifka DF oo qaadatay xiisda Sacuudiga & Canada – Radio Baidoa
Wasiir CAWAD oo sharaxay mowqifka DF oo qaadatay xiisda Sacuudiga & Canada
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibada Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sharaxay muhiimada Warsaxaafadeed maalin ka hor Wasiiradiisu ay soo saartey.
Warsaxaafadeed ayaa waxaa qeyb ka ahaa in Xukuumadda Soomaaliya ay adkeyneyso mowqifka Sacuudiga ee khilaafka kala dhaxeeyo dowladda Canada,waxaana u muuqatay in dowladdu taageertay Sacuudiga.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibada Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in xukuumaddu aysan sigaar ah u taageerin Sacuudiga laakin mowqifkoodu uu yahay in xal la gaaro.
Waxa uu sheegay Wasiirku isaga oo la hadlayey Idaacadda BBC-da in dowladda Soomaaliya aysan shaacin hadalo ay ka caroon karto dowladda Canada balse ay csdeysay in khilaafka Sacuudiga iyo Canada wadahadal lagu dhameeyo.
Sidoo kale, iyadoo arrintaa ka falcelinaysa, xukuumadda Riyaad waxay eriday safiirkii Canada waxay kaloo hakisay iswaydaarsiga barnaamijyada dhanka waxbarashada.
Ciidamo cusub oo la keenay isgoysyada Muqdisho iyo taliyaha ay ka amar qaatan